Duufaanta Irma oo gaartey gobolka Florida ee dalka Maraykanka • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Duufaanta Irma oo gaartey gobolka Florida ee dalka Maraykanka
Duufaanta Irma oo gaartey gobolka Florida ee dalka Maraykanka
Roobab aad u culus oo dabaylo wata ayaa garaacaya xeebaha gobolka Florida ee dalka Maraykanka. Duufaanta Irma ayaa burbur lixaad leh u geysatey jasiiradaha yaryar ee dhaca Badda Kaariibiyaanka iyo weliba Jasiirada Kuuba, waxaana la diiwaan geliyey dhimashada 25 qof.
Gobolka Florida ayaa si weyn looga qaxay, dad badan ayaa u baxay gobolada kale ee Maraykanka, halka 75 000 oo qof ay iska diiwaan geliyeen goobo dowladdu u diyaarisey in looga gabado duufaanta Irma oo hadda laga dhigey Kaatogiri 4, waxaana lagu tilmaamey midkamid ah kuwii ugu cuslaa ee abid soo mara Maraykanka.
Sida ay ku waramayaan warbaahinta Maraykanka 6 milyan oo qof ayaa ka qaxay gobolka Florida, waddooyinka ayaa cidla ah, dadkana waxaa looga digey in ay sugaan duufaanta Irma. Barasaabka gobolka Florida ayaa dadka kala hadley Warbaahinta waxaana uu ku amrey in ay baxsadaan o0o aysan sugin duufaanta.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa amaaney dadka ka shaqeynaaya badbaadinta dadka, waxaana uu u diegay kuwa weli ku sugan gobolka, waxaana uu yiri Irma waa timid, ilaah ha idinka badbaadiyee.
Duufaantii tan ka horeysey ee Harvey ayaa dad badan ku dishey gobolka Taxes, waxaana ay dhalisey Balaayiin khasaaro ah.